Ahoana ny fomba hisafidianana caliper tsara indrindra? fahasamihafana eo amin'ny nomerika sy ny boky fampianarana
Ny caliper dia fitaovana ampiasaina handrefesana ny elanelana misy eo amin'ny andaniny roa amin'ny zavatra iray: azonao refesina, miaraka amin'ny marimarina hatramin'ny 0.01mm, izay rehetra tsy mora refesina amin'ny fitaovana hafa,. Na dia mbola mahazatra aza ny vernier sy ny dial, ankehitriny ...
Inona no maha samy hafa ny calipers sy micrometers
Ny calipers dia fitaovana fampitaovana ampiasaina handrefesana ireo refy ara-batana, matetika ao anaty fandrefesana, na refy ivelany, na halaliny. Ny mikrometera dia mitovy, fa matetika namboarina ho an'ny karazana fandrefesana manokana, toy ny refy ivelany ihany na ny refy anatiny ihany. Micromet ...
Ahoana ny fampiasana kalifera vernier sy nomerika
Ny Vernier Caliper dia fitaovana marina izay azo ampiasaina amin'ny fandrefesana ny elanelam-potoana anatiny sy elanelana ivelany miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta. Ny valiny refesina dia hadika avy amin'ny refin'ny fitaovana ataon'ny mpandraharaha. Fifandraisana amin'i Vernier sy fandikana ny ...